Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: လွမ်း.......... တစ်ရက်တစ်ရက်ကို အမင်းညင်စွာနန့်လည်း သီရဖို့ဝေး
လွမ်း.......... တစ်ရက်တစ်ရက်ကို အမင်းညင်စွာနန့်လည်း သီရဖို့ဝေး
Mar Ra Yuu's Facebook
အခု ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ကုလားတွေရဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကို မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားပြည်သူ အများတို့ သိထားကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကုလားတွေရဲ့ ရက်စက်အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ရွာတွေပြိုပျက်ပြီး သေသူသေ၊ ပျောက်သူပျောက်နဲ့ အခုထက်ထိတိုင်အောင် ရခိုင်ပြည်သူများမှာ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုတွေစိုးမိုးဆဲပါ။ ကုလားတွေဟာ NGO တွေကိုခုတုံးလုပ်ပြီး... ရခိုင်ပြည်ကို စိုးမိုးနိုင်ဖို့အတွက် အစကတည်းက အစီအစဉ်တွေဆွဲထားပြီးပါပြီ။
ဒါပေမဲ့မထင်မှတ်တဲ့ ကိစ္စကြောင့် သူတို့ရဲ့အစီအစဥင်္တွေဟာ လွဲချော်ပြီးတော့ အချိန်မတိုင်ခင်စလိုက်ရလို့ ရခိုင်ပြည်အတွက်သက်သာရာရလိုက်တာပါ။ နို့မို့ဆို မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုတာ ပျောက်သွားရလိမ့်မယ်။ သူတို့အဓိက ခုတုံးလုပ်သွားတာတဲ့ NGO ကတော့ AZG ပါ။ သူတို့ကပဲ AZG ကို ခုတုံးလုပ်သလား၊ AZG ရဲ့အကြီးအကဲကပဲ ကုလားတွေကို အစီအစဉ် ချမှတ်ဖို့စေခိုင်းလေသလားတော့ မသိပါဘူး။ ထူးခြားတာက AZG မှာက ထိပ်ပိုင်းအဆင့်ဝန်ထမ်းတွေကတော့ အကုန်လုံးကုလားတွေပါပဲ။ အခုဖြစ်စဉ်(ရခိုင်ပြည်ကို ကုလားများစိုးမိုးရေး)ကို ဥိးဆောင်တဲ့သူတွေဟာ အကုန်လုံး NGO ၀န်ထမ်းတွေပါ။ AZG က ၀န်ထမ်းအများစုပါပါတယ်။ ဒါကို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ AZG အကြီးအကဲတွေက မသိလေသလား။ ဒါမှမဟုတ် သိရက်နဲ့ ရခိုင်ပြည်သူထုကိုစော်ကားဖို့ထပ်ကြိုးစားတာလားမသိဘူး။ AZG ဆိုတာ တကယ်တမ်းတော့ ကုလားတွေကိုထောက်ပံ့တဲ့အသင်းပါ။
အခုဖြစ်နေဆဲကာလမှာ AZG က ကုလားတွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ဆိုပြီး ရခိုင်ပြည်သူလူထုကို ကမ်းလှမ်းလာနေပါပြီ။ ရခိုင်လူထုက ငြင်းပယ်တဲ့အခါ AZG ရဲ့ ရခိုင်ဝန်ထမ်းတွေကို အလုပ်ထုတ်ပစ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ထားပါပြီ။ အခုလိုလာပြီး ကမ်းလှမ်းလာတဲ့ သူတွေကတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားစစ်စစ် တွေပါ။ သူတို့လေးဦးဟာ ဒီနေ့(၂၄-၆-၂၀၁၂)မှာ ဒီအကြောင်းကိုအတင်းအကြပ်လုပ်ရမယ်လို့ ရှိရင်းစွဲ ရခိုင်ဝန်ထမ်းတွေကို ခြိမ်းခြောက်ပါတယ်။ ကုလားတွေကိုထောက်ပံ့ရေးလုပ်ရမယ်လို့။
သူတို့တည်းခိုနေတာကတော့ နှစ်ဦးကတော့ စစ်တွေမြို့၊ ရွှေသဇင်ဟိုတယ်မှာ နှစ်ဦးနဲ့ အခြားနှစ်ဦးကတော့ အခြားတည်းခိုရာနေရာတစ်ခုမှာ တည်းခိုတယ်လို့သိရပါတယ်။ တကယ်ဆိုရင် အခုလို မြန်မာဝန်ထမ်းလေးဦးဟာ အမျိုးသားရေး အသိနည်းနည်းလေးထည့်ပြီး အထက်အကြီးအကဲခိုင်းတာကို ပညာသားပါပါငြင်းပယ်လို့ရပါတယ်။ သူတို့မငြင်းပယ်နိုင်တာက သူတို့ရဲ့ငွေပါပဲ။ ငွေက သူတို့ရဲ့ အမျိုးသားရေးအသိကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါပြီ။ ဒီလိုလုပ်တဲ့ကိစ္စကို ရခိုင်ပြည်သူလူထုကလည်း ဒေါသထွက်လို့မဆုံးဖြစ်နေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက တကယ်လို့ AZGရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တာဝန်ယူလာတဲ့ မြန်မာဝန်ထမ်းလေးဦးအနေဲ့ ဒီတာဝန်ကို ရခိုင်ပြည်ကနေ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ အမျိုးသားရေး အသိနည်းနည်းလေးတော့ ရှိသင့်တယ်လို့မြင်ပါတယ်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 03:48
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: လွမ်း.......... တစ်ရက်တစ်ရက်ကို အမင်းညင်စွာနန့်လည်း သီရဖို့ဝေး . All Rights Reserved